Burmese Cuisine Day at Pankl Racing Systems – We Help and Care
31. October 2021 28. December 2021 / By admin
We Help and Care konnte gemeinsam mit der Firma Pankl Racing Systems AG einen Charity Event durchführen. Am 14.10.2021 kochte der Verein WHC gemeinsam mit dem Küchenteam bei Pankl ein burmesisches Mittagsessen, dessen Umsatz dem Verein We Help and Care gespendet wurde. Pankl verdoppelte diesen Tagesumsatz und mit den zusätzlichen freien Spenden der Mitarbeiter:innen konnten insgesamt €3.639,00 gesammelt werden.
Unser Dank gilt der Firma Pankl mit dem CEO Mag. Wolfgang Plasser, dem Küchenteam, den Unterstützer_innen bei der Organisation und allen Mitarbeiter:innen!
Dank euch allen können wir vielen Menschen in Myanmar helfen und weitere wichtige Projekte umsetzen.
Weitere Informationen zu diesem Event und allen anderen Projekten von We Help and Care findet man unter:
အောက်တိုဘာလ ၁၄ရက်နေ့တွင် Pankl Racing Systems AG ကုမ္ပဏီ ကန်တင်းမှ နေ့လယ်စာရောင်းရငွေများအား We Help and Care အဖွဲ့သို့ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
လိုအပ်သူများအား ကူညီရန်အတွက် Pankl Kampferberg ကန်တင်းမှဝန်ထမ်းများ၊ We Help and Care အဖွဲ့အစည်းနှင့် Pankl ကုမ္ပဏီမှ CEO Wolfgang Plasser တို့ ပူးပါင်း၍ ရန်ပုံငွေပွဲအား ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုရန်ပုံငွေပွဲဖြစ်မြောက်ရန်အတွက် အမျိုးမျိုးသော မြန်မာ့ဟင်းလျာ (အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ၊ တိုဖူးကြော်၊ အမဲသားနှပ်၊ သီးစုံပဲကုလားဟင်း၊ ထောပတ်ထမင်း၊ ငှက်ပျောရွှေကြည်ဆနွင်းမကင်း နှင့် အုန်းနို့ ကျောက်ကျော) များအား
Pankl canteen မှ ဝန်ထမ်းများနှင့် WHC အဖွဲ့အစည်း၏ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများမှ Pankl ကုမ္ပဏီရှိဝန်ထမ်းများ နေ့လယ်စာအတွက် ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် WHC အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ပတ်သတ်သော အချက်အလက်များကိုလည်း မျှဝေပေးခဲ့ပါသည်။ ဤရန်ပုံငွေပွဲတွင် စုစုပေါင်း ယူရိုငွေ ၃၆၀၀ ကျော်အားရရှိခဲ့ပါသည်။
ဤရန်ပုံငွေပွဲနှင့်ပတ်သတ်၍ထပ်မံသိရှိလိုပါက အောက်ပါဆောင်းပါးတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Flyers and donation box
Presentation of WHC
More hungry donors
Waiting for Ohn no khao swè
Pankl CEO with Pankl kitchen chefs and WHC